"सैमसंग" - एक 32 इन्च टिभी: एक अवलोकन, सुविधा र मालिकको समीक्षा
अब धेरै केही सबैभन्दा बिना बाँच्न सक्दैन, टिभी हेर्न जो रुचि छैन। सबै भन्दा लोकप्रिय उपकरणहरू स्मार्ट टिभी मोडेल भनिन्छ गर्न सकिन्छ। तिनीहरूले "एक दुई" को प्रविधी हो। यो टिभि दुई कार्यहरु कार्य: इन्टरनेटमा जडान गर्न सक्नुहुन्छ, र पनि एउटा पोर्टेबल कम्प्युटर यसको अभिप्रेत उद्देश्य लागि काम गर्दछ।
सबै यन्त्रहरू बीच सुनको मतलब स्क्रिनमा 32 छ को एक विकल्प, को विकर्ण हुनेछ मा चयन सैमसंग "। टिभी (32 इन्च),"। यो त भारी हुनेछैन, तर पनि सानो छैन पाउनुहुनेछ छ। धेरै वर्षसम्म यो बजार नेता कम्पनी छ " शाखा, आफ्नो गठन गुणस्तर खुसी हुनेछ र सबै भन्दा राम्रो-बिक्री उपकरण निगम देखाउन -। यो "स्मार्ट टिभी" मोडेल छ।
सैमसंग देखि बजेट विकल्प बीच उल्लेख गर्नुपर्छ ue-32J4100। तपाईं उपभोक्ताहरु गर्न आवश्यक थप विकल्पहरू उपलब्धता उपकरण लागत मिलाउँछ। औसत मूल्य वरिपरि 19 हजार छ। जसको लागि खरीदार प्राप्त हुनेछ हालको आवश्यकताहरु जो एक बहु-टिभी, Rubles।
मोडेल ue-32J4100 - टिभी "सैमसंग" (32 इन्च, "स्मार्ट टिभी" समर्थित छैन), जो स्क्रिनको विशेष महंगा घटक छैन। भौतिक, यो सिर्जना गर्न धेरै महंगा छैन लिएको, तर कम्पनी उच्च गुणवत्ता प्रदर्शन कसरी बनाउने थाह र यसको प्रतिष्ठा समर्थन जारी छ। 1366x768 पिक्सेल - व्यास 81 सेमी र संकल्प छ। स्क्रिनमा एक पारंपरिक तरल क्रिस्टल एलसीडी प्रकार को गुण छ। त्यहाँ वितरित छ जो एलईडी प्रविधि, सिर्जना ज्योति हो। यसलाई खराब र राम्ररी रोशनी कोठा मा दुवै कारणले यसको सुविधाजनक चमक स्तर सहज हेर्ने प्रदान गर्दछ।
मूल्य निर्धारण नीति (मोडेल लागि - सस्ता एक) बावजुद 100 हर्ट्ज को एक आवृत्ति संग छवि "अद्यावधिक"। धन्यवाद यो समाधान गर्न, ग्राहक कुनै पनि विकृति बिना एक उच्च गुणवत्ता, उज्ज्वल र जीवन्त तस्बिर प्राप्त गर्दछ।
टिभी "सैमसंग" (32 इन्च), यो स्वीकार्य छ जो मा मूल्य, धेरै सुखद ध्वनि छ। अडियो सिस्टम वक्ता, हेडफोन ज्याक, वाट एम्पलीफायर को एक अधिकता comprises र ध्वनि समायोजन गर्नुहोस्। संवर्धन प्रक्रिया ध्वनि कारण हुन्छ जो एक डिकोडर पनि छ। उहाँले घेर प्लेब्याक गर्न सक्षम छ। अधिकतम ध्वनि स्तर स्वीकार्य छ, तर त्यहाँ कसैले यसलाई पर्याप्त नहुन सक्छ भन्ने एक संभावना छ।
दुवै डिजिटल र एनालग टीभी लागि समर्थन - यस्तो गुण "सैमसंग" को प्रविधी छ। टिभी (32 इन्च) विभिन्न भिडियो स्वरूप जसद्वारा को रोलर्स अवलोकन गर्न सकिन्छ बाह्य एडेप्टर देखि र televyshek मा दुवै reproducing सक्षम। तपाईं पारंपरिक एन्टेना र उपग्रह को मेसिन जडान गर्न सक्नुहुन्छ।
भौतिक गुणस्तर 480і र 480 पिक्सेल 1080 र 1080і देखि (सबै प्रदर्शित छन्) पूर्ण कुनै पनि हुन सक्छ। साथै, टिभी एक ल्यापटप कम्प्युटरमा एक मनिटर रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो धेरै रिजोल्युसन काम समर्थन गर्दछ, तर ती सबै भन्दा मा पक्ष मा कालो पट्टी को उपस्थिति अपरिहार्य छ।
विशेष गरी बजेट लाइन बाट, यी टीवी को सबै भन्दा एक ट्युनर जडान गर्ने क्षमता छ। यो मोडेल - छैन अपवाद तथापि, कार्य "चित्रमा तस्वीर" को लागि समर्थन वर्तमान छ।
टेलिभिजन को उल्टो पक्ष मानक "आरसीए" देख्न सकिन्छ मा टी। ई ए वी-इन्टरफेस वर्तमान छ। सबै लोकप्रिय टिभी तल देखाइएको छ मूल्य जो स्वरूप "सैमसंग" (32 इन्च), उर्तानु गर्न सक्षम छ। अपवाद मात्र विरलै भिडियो रेकर्डिङ लागि प्रयोग गरिन्छ कि भन्ने हुनेछ। निर्माता पनि केही HDMI जडानहरू राखे। बाह्य मिडिया, सेट युएसबी-मा एक भिडियो वा फोटो हेर्न जाँदैछन् गर्नेहरूका लागि। तपाईं एक वक्ता ध्वनि प्रणाली जडान, वा विशेष कनेक्टर प्रयोग गरेर वा एउटा अप्टिकल इन्टरफेस प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
मूल्यहरु ue-32J4100 लागि
तपाईं "सैमसंग" कुनै पनि उपकरण किन्न अगाडि (टिभी 32 इन्च कुनै अपवाद हुनेछ), यो विशेष सपिङ्ग सेन्टर र अनलाइन खरिद प्रस्ताव पसलहरुमा मूल्यहरु तुलना गर्न आवश्यक छ। एक को लागत र यो मामला मा नै मोडेल धेरै फरक हुनेछ। रूस मा, ue-32J4100 मा औसत मूल्य युक्रेनमा उपकरण खर्च हुनेछ गर्दा7हजार। रिव्निया बारेमा 17-18 हजार छ। Rubles।
एउटा सानो कोठा लागि (12-17 वर्ग। एम) यस निर्माता देखि सिद्ध वर्णन मोडेल हो। यो तथापि, धेरै रोमाञ्चक सुविधाहरू छ, र बेफाइदा पनि छैनन्। प्रमुख बीचमा धेरै सानो कोठा मा तस्वीर धमिलो गरिने उल्लेख हुनेछ, र दर्शक तथाकथित पिक्सेल देख्नेछन्। ठूलो कोठा मा, जसको क्षेत्र 20 वर्ग मीटर भन्दा बढी छ। एम।, पर्याप्त बिजुली र चमक ध्वनि छैन। तपाईं पनि पूर्ण HD, केही ढाँचाको प्लेब्याक र परमिट को एक नम्बर, ल्याप्टप लागि उपयुक्त रोक्न भनेर कोडेकहरू एक जोडी को संकल्प को कमी हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ।
लाभ डिजिटल टेलिभिजन र अस्तित्व लागि गति ताजा दर, समर्थन थप्न आवश्यक HDMI कनेक्टरों। यो पनि "सैमसंग" बाट मिसिन "घमण्ड" गर्न सक्नुहुन्छ। टिभी (32 इन्च) सानो लागत छ, र यसको बेफाइदा सबै त भयानक छैनन्, त्यसैले यो मोडेल सबैभन्दा picky खरिदकर्ताहरूको लागि सफल हुनेछ।
Samsung UE32H5500 - स्मार्ट टिभी टिभि
यो टिभि "Samsun" (32 इन्च; "स्मार्ट टिभी" समर्थित) एक उच्च पर्याप्त संकल्प छ, यो आफूलाई हेर्ने प्रक्रियामा डुबाउनु र सबै घटनाहरू एक नायक जस्तै महसुस हुनेछ। प्रस्तुति मा कर्पोरेट विकासकर्ताहरूले कहिल्यै नियमित टिभी धारावाहिक मा समीक्षा गर्न चाहँदैनन्, UE32H5500 मा चलचित्र हेर्न एक व्यक्ति छ कि तर्क। छवि गुणस्तर उच्चतम स्तर मा बनाए छ। यो चमक मा परिवर्तन को समारोह योगदान पुग्छ। यसबाहेक, उपकरण रंग प्यालेट यन्त्र स्थिर मिसिन देख्न सक्नुहुन्छ कि धेरै रंग पहिचान भनेर विविध छ।
Multifunctional सैमसंग ue-32F5500
एक पनि उच्च लागत छैन कि एक मोडेल, लामो बजार मा entrenched गरिएको छ। 100 हर्ट्ज बारेमा यो टिभि मा एक तस्वीर को आवृत्ति परिवर्तन, र रोशनी छवि गुणस्तर सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। टिभी "सैमसंग" स्मार्ट (32 इन्च), 19 हजार को क्षेत्र मा जो को मूल्य। Rubles, DVI र USB को लागि धेरै connectors छ।
उपकरण वाइफाइ र लैन जडान समर्थन गर्दछ। उपकरणमा स्थापित सफ्टवेयर बीच, यो त्यहाँ स्टेरियो र घेर प्लेब्याक सहित को संभावना छ सम्भव, "बच्चाहरू" सबैभन्दा लोकप्रिय र प्रयोग :. "स्काइप", ब्राउजर पहिचान गर्न, आदि छ।
यो मोडेल एक उच्च गुणस्तरीय र विश्वसनीय उपकरण हो। 1920x1080 पिक्सेल र फ्रेम ताजा दर - - 100 हर्ट्ज टिभी व्यास 81 सेमी, संकल्प छ। यन्त्र ब्याकलाइटद्वारा र requisition छ। यो यस्तो "सैमसंग" टिभी (32 इन्च) रूपमा राम्रो साधन बन्न अनुमति दिन्छ। "स्मार्ट टिभी", यन्त्रको मूल्य किनभने जो अनिवार्य सजिलै र stably चलिरहेको बढ्छ। वक्ता उत्पादन शक्ति 20 वाट, ध्वनि, सिद्धान्त, एक बजेट विकल्प छ - राम्रो। बाह्य लाभ बीच रिमोट र प्रयोगकर्ता-अनुकूल मेनु समावेश गर्नुहोस्। दुर्भाग्यवश, भनेर, वाइफाइ काम गर्न कुनै अनुमति दिन्छ मोड्युल। तपाईं प्यानल छेउमा USB, HDMI र यति मा लागि कनेक्टरों देख्न सक्छौं। आदि।
मोडेल संकल्प - 1920x1080 पिक्सेल। उपकरण 2D देखि 3D भिडियो स्थानान्तरण कार्य समर्थन गर्दछ। वक्ता शक्ति 20 वाट। यो टिभि उत्कृष्ट विशेषताहरु छ। विशेष मा, फ्रेम 200 हर्ट्ज अद्यावधिक गर्नुहोस्। वाइफाइ समर्थन पनि वर्तमान छ। उल्लेख गर्न सकिन्छ minuses को एकदम सजिला रिमोट र अबोध्य सन्दर्भ मेनु छैन। कति टिभि "सैमसंग" (32 इन्च) स्मार्ट टिभी छ? मूल्य 15-20 बीच हजार फरक हुन्छ। Rubles।
दुकानदारों को बेफाइदा बीच निर्माता धेरै वर्ष दाबी पनि यद्यपि, "सैमसंग" कम्पनी मोडेल को सबै भन्दा सञ्चालनको एउटा सानो अवधि छ भन्छन्। धेरै मालिक एक ठूलो रकम खर्च मर्मत, तर त्यहाँ समर्थन गर्न इन्कार सामना गर्दै गर्नेहरूलाई छन्। वास्तवमा, मात्र gripe निरन्तर हुन्छ कि।
प्रदर्शन को समीक्षा प्रभावित - लगभग सबै तिनीहरूलाई को सकारात्मक। (हुनत यो पक्ष धेरै मोडेल छैन लागू हुन्छ) मानिसहरूले छवि गुणस्तर, राम्रो ध्वनि र टिप्पणी एक एकदम सरल मेनु मूल्यांकन गर्छौं। सबै भन्दा राम्रो टिभी "सैमसंग" (32 इन्च) छ पछि हामी खातामा सान्दर्भिक साइटहरूमा टिप्पणी अधिकांश लिन भने, हामी भनेर भन्न सकिन्छ। मूल्य र समीक्षा सम्पूर्ण प्रत्येक अन्य संग लगातार।
नोकिया 6303 क्लासिक: समीक्षा, वर्णन, विनिर्देशों र मालिकको समीक्षा
सानो quadrocopter क्यामेरा। संसारको quadrocopter मा सानो
औद्योगिक dehumidifier: छनौट र समीक्षा सुझावहरूको
कल 2013: डिजिटल आवाज रेकर्डर को "दोषी को अनुमान" विरुद्ध
एयर कंडीशनर कसरी सफा गर्ने? हावा कंडीशनिंग रेडियेटर कसरी सफा गर्न: सुझावहरू, फोटो
औषधि फ्रिज "Pozis": निर्देश, प्रतिक्रिया, निर्माता
Reverend जस्टिन Popovich: जीवनी, लेखोटहरू, रोचक तथ्य
साईट सुई महिला: बुनना crochet रूमाल गर्न सिक्दै
के गर्छ "aseismic": अर्थ र शब्द को मूल
लियोनार्डो दा विंची, नाम र वर्णन संग
विश्वव्यापी पावर सञ्झ्यालहरूको फाइदाहरू के हुन्?
भ्याक्युम सफा बश BGS 62530: लाभ, बेफाइदा विशेषताहरु,
उद्यान, वर्गहरूको र पार्क Kharkov: विवरण, ठेगाना र समीक्षा
होटल Swissotel फुकेत Resort4* थाईल्याण्ड, फुकेत: समीक्षा, वर्णन, विनिर्देशों र समीक्षा
कीराहरू को दुनिया। एक कीरा को जीव
Catamaran Anapa - याल्टा: लागत, कार्यक्रम
सबैभन्दा सुन्दर प्रकृति रिजर्व र राष्ट्रिय पार्क रूस (नाम)
भित्री ईटा र यसको फाइदा। इट्टा सामना गर्न विकल्पको रूपमा अनुहार प्यानलहरू समाप्त गर्दै